Vagadziri bhegi - China Backpack Fekitori, Vatengesi
Unyanzvi: Bhegi bhegi dhizaini yemafashoni ine saizi ye 29 * 14 * 45cm (L * W * H) .Iyo huru imba ine yakawanda divider uye yakavakirwa-mukati yakakoshwa ruoko ruoko inokwana kusvika 15.6 ″ laptop. zvaunoda zvezuva nezuva, mabhuku, mbatya, simba kubhengi, headphone uye zvichingodaro. Imba yepamberi ine akawanda akapatsanura homwe inobatsira kuronga ako madiki stuffs, zvinyoreso, chikwama, foni, tambo nezvimwewo Rimwe divi zipi homwe uye rimwe divi pajira riya muhomwe; back anti kuba muhomwe yezvinhu zvakakosha.
Iri bhegi ndeye fashoni dhizaini bhegi bhegi, inokodzera varume, vakadzi, vadzidzi chero chinangwa. TIGERNU bhegi rakanakira chikoro, yunivhesiti, kupera kwevhiki, kufamba pano neapo, majimu, basa rezuva nezuva, bhizinesi, rwendo, musasa uye kukwira.
TIGERNU yechando akateedzana varume fashoni bhegi
Unyanzvi: Uku kukura kwevarume bhegi iri 30 * 15 * 43cm (L * W * H), inokwana kusvika 15.6inch laptop.Chikamu chikuru chakazara zvakakwana kumabhuku ako, nhare, chikwama, foni, bhangi remagetsi zvichingodaro. Homwe mbiri dzeparutivi dzakanakira bhodhoro remvura uye amburera. Kumberi maviri zipi homwe uye kumashure anti kuba muhomwe zvinokupa iwe nyore kuwana kune ako madiki stuffs.Iyo yakawanda chinangwa chinangwa bhegi uye inogona kuchengetedza zvinhu zvako zvese zvakarongeka.
Hunhu: Iyo bhegi rakagadzirwa nespashproof & Oiri chiratidzo & murazvo unodzora oxford. Iyo yakasimba uye eco-hushamwari zvinhu, anti kubvarura uye inogara kwenguva refu mhando. Iwo zipi uye zvimwe zvishongedzo zviri zvemhando yepamusoro zvakagadzirwa neTIGERNU logo.
Zvimiro: Gadzira mu USB chiteshi uye inowoneka USB tambo inokupa iwe iri nyore nzira yekuchaja foni, piritsi, nezvimwewo Iyo nharembozha inopa rusununguko rwako kunakirwa nemumhanzi chero nguva. Zipper dzinokiyiwa dzinokupa kuchengetedzeka kana iwe ukapfeka iyi TIGERNU bhegi. Iyo tambo inoratidzira inoita kuti iwe uwedzere kuoneka uye kuchengeteka husiku. Maumbirwo tambo inogadziriswa uye inogona kudzikisira kumanikidza papfudzi.
TIGERNU bhegi rakakodzera chero chiitiko uye chero vanhu.
TIGERNU inowedzerwa yakakura yekukwanisa kufamba bhegi
Unyanzvi: Bhegi rekufamba rine hukuru huviri, saizi imwe iri 30 * 15 * 45cm, inokwana kusvika 15.6, Laptop uye saizi imwe ndeye 30 * 19 * 50cm iyo inogona kuwanda, inokwana kusvika 19inch laptop. bhegi rine 23L kusvika 38L. Iwo makamuri mazhinji akarongeka uye yakakura nzvimbo yakakwana kune rwendo kana kukwira. Pane kamuri rakakamurwa rakapatsanurwa repamhepo. Kamuri hombe ine nzvimbo huru, inokwana rwendo rufupi nepikiniki nekufamba musango.
Inovakwa muUSP & Earphone Ports: Kunze USB kuchaja chiteshi neinosvikika 4.0 inokurumidza kuchaja tambo inopa mukana wekuchaja foni yako uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi chero kupi. Buri rehedhifoni kunze rinopa nyore kuwana kune nzeve yekushandisa
Dhizaini Yemunhu: Inogadzikana ergonomic dhizaini yakasungirirwa mabhanhire epfudzi uye kufefetedza kwakaputirwa kumashure kunogona kudzora kushushikana kwepafudzi. Mukwende bhandi rinogona kugadzirisa mukwende padhiragi trori kuti nyore kutakura.
Chinyorwa: Yakagadzirwa nemvura isingadziviriri oxford machira uye yakakwira-density polyester machira ekugara kwenguva refu. Yakavezwa mbiri-yakasara yakavharika zipi dhizaini yekamuri huru inobvumira nyore kuwana uye kuwedzera kuchengetedzeka
Iri bhegi isarudzo huru, inokodzera hupenyu hwekoreji, kufamba kwebhizinesi uye zviitiko zvekunze. Koshesa zvipo kune avo vanoenda kuchikoro, kufamba kana kushanda
TIGERNU yakawanda-chinangwa anti kubira laptop bhegi
Chinyorwa: Iyo USB laptop bhegi rakagadzirwa nesplashproof & kukwenya isingagadzi zvinhu, inogara kwenguva refu, yakasimba, inorwisa-kubvarura. Iyo zipi inoshandiswa inogadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu. Main compartment use lockable two way open zipper, inotsvedzerera kushandisa uye zvinopa chengetedzo yakawedzera pakufamba kwako.
Unyanzvi: Chikamu chikuru chinogona kuvhurika chakavhurika pamwe neshinda yakakomberedzwa yelaptop inokwana kusvika 15.6 ″ laptop uye 9.7 ″ piritsi.Iye inokwana zvakakwana bhuku rako, mbatya, mabhodhoro, bhangi remagetsi, chikwama uye zvichingodaro. 1 yakavanzika zipi muhomwe kumusana kweserifoni / chikwama uye zvemunhu zvinhu; Makapfudzi kadhi slot uye zuva girazi mubati dhizaini, iri nyore kune ako anowanzo kushandisa zvinhu
Zvimiro: External USB port ine yakavakirwa muinosvikika USB tambo dhizaini ita kuti iyi USB bhegi rive nyore kubhadharisa nharembozha yako pasina kutora yako simba bhengi. Kudzosera mukwende tambo dhizaini inokutendera iwe kukodzera bhegi pane mukwende / sutukesi kuti zvive nyore. Iyo zipi inokiyiwa neyakavakirwa-muTSA kukiya inoita kuti kufamba kwako kuchengeteke kubva kune mbavha.
Ruvara ruripo: Dema, Grey, Pinki, Dzvuku.
Iyi anti kuba bhegi rine TSA kukiya isarudzo yakanaka yehupenyu hwako hwezuva nezuva, bhizinesi, basa, rwendo, chikoro uye hupenyu hwezuva nezuva.
TIGERNU yemaguta dhizaini bhizinesi bhegi
Iyo TIGERNU bhegi rakaringana kune iyo-yeku-kuenda techie. Iyo inogara yakasimba uye ine akawanda emahombekombe-ane homwe muhomwe, kusanganisira hombe padhidhi yekomputa ye laptop inosvika 15.6 ”uye hombe kamuri inokwana zvakakwana kune zvako zvese zvezuva nezuva zvaunoda.
Yakavakirwa kugara uye kugadzirwa kwekufamba, iyo Drifter Backpack inozvirumbidza muhomwe dzinoverengeka dzekuchengetedza yako ese magiya. Kubva kumberi yekumhanyisa-stash kumberi kwehomwe kuenda kunzvimbo yekuhwanda, yakakoshwa lumbar muhomwe kune hombe hombe yekuchengetera kamuri uye zvakare emahombekombe emahombekombe ane ese muhomwe uye yekuchengetedza iwe yaunoda.
Zvinhu Zvisingagumi Zvekushandisa Kwakakwasharara
Yakagadzirirwa murwi wechokwadi wemumugwagwa, iyi rongedza yakagadzirirwa kutevedzera kuomarara kwerwendo. Yakagadzirwa yakasimba zvinhu zvenaironi zvinhu uye isina mvura-base, ino bhegi ichaita kuti giya rako ridzivirirwe uye riome kubva kumatenga uye mazuva ese kupfeka uye kubvaruka. Iyo inogara zvakare yakasimba zipper pullers uye patent mbiri yakapetwa yakakiyiwa zipper- yakakwana kune rinorema basa rekushandisa uye chengetedzo rwendo.
Iyo bhegi bhegi rine mbiri rakapetwa rinogadziridzwa mabhanhire epapfudzi uye rakapetwa kumashure pani iyo inosimudzira kufema kwemweya kwekunyaradzwa pairi kuenda.
Icho chikwama chakakwana chebhizimusi rako rwendo, basa, kuenda, kufamba, kudzika musasa, chikoro, kunotenga, pikiniki. Sarudzo yakanaka yechinangwa chose.
TIGERNU nzira mbiri dzinoshandisa shanduko yekufamba bhegi
Iri bhegi ihombe hombe yekufambisa bhegi, yakagadzirirwa rwendo rwebhizinesi, chikoro, basa, kufamba uye chero chinangwa.
Chinyorwa: Iyi bhegi rekufamba rinoshandisa splashproof & kukwenya kusagadzikana oxford sechinhu chikuru, chakasimba, chinogara kwenguva refu, eco-hushamwari.Zipper zvakagadzirwa neTIGERNU logo yemhando yepamusoro.Zipper huru ndeye TIGERNU patent yakapetwa kaviri nzira mbiri dzinovhura zipi inokiyiwa. yezvinhu zvako.
Unyanzvi: Ukuru hwemashure bhegi i31 * 18 * 47cm (L * W * H), inokwana kusvika 15.6, laptop.Iri bhegi rine rakaparadzana remakamuri ekuvhura kubva kudivi, iri dhizaini iri nyore. Chikamu chikuru chakazara zvakakwana nehomwe diki diki dzemabhuku ako, mbatya, nharembozha, chikwama nezvimwewo homwe yepamberi yehomwe yezvinhu zvako zvidiki uye imwe kumashure yakavanzika muhomwe yechinhu chako chakakosha.Bhegi iri rinogona kuchengetedza zvinhu zvako zvakarongeka uye hapana chikonzero chera kuti uwane zvaunoda.
Zvimiro: Bhegi rine bhegi rakasimbiswa uye tambo imwe yepafudzi, inogona kushandiswa sehombodo uye bhegi panguva imwe chete. Nechekunze USB yekuchaja chiteshi & yakavakirwa-inodzika inodzika tambo yekuchaja, TIGERNU bhegi rinopa iri nyore nzira yekuti iwe ubhadhare yako yemagetsi kifaa painoenda.Ergonomics uye inogadzikiswa S-chimiro padding bhanhire tambo bvisa kushushikana pamafudzi.
Iri bhegi rehomwe, hukuru hukuru, hwakakwana kune chero chinangwa, kufamba, kushopa, basa, chikoro, musasa, pikiniki yevarume, vakadzi uye vadzidzi.
TIGERNU hukuru hukuru hwakawanda muhomwe bhegi
Iyo TIGERNU bhegi inonunura anoshanda ekuchengetedza dziviriro mumaonero ano.
• Yakakwira mhando oxford zvinhu, splashproof, anti-kubvarura uye eco-inoshamwaridzika.
• Ine furemu-yakachena-yakamisikidzwa furemu, irori rinoratidzira rakazara padenga remukati kudzivirira laptop yako kubva kumazuva ese mapundu.
• Yayo yakasungirirwa bhanhire tambo uye kumashure kwepaneru inounza yakasununguka kutakura pamusoro pemapfudzi.
• Uye tambo yetrolley iri nyore inobvumira kutakurika kusingatakurike pakutakura mukwende.
Hukuru hwayo i31 * 20 * 47cm (L * W * H) Iine kamuri hombe hombe ine homwe zhinji dzezvakakosha, matatu akasungwa zipi dzekukasira-kumberi kumberi, uye maviri eparutivi zipi hombodo dzemvura hombodo. rongedza rako rezuva nezuva giya uye chengeta bhegi rako rakarongedzwa uye rakarongedzwa.
• Rimwe divi rakavhurika rakazara padenga rekomputa rinokwana kusvika 15.6 ″ laptop, zvakare iri nyore kuwana uye kuchengetedza zvakavanzika zvako.
• Gadzira-mu USB chiteshi uye tambo inobviswa inoita kuti iwe ugone kubhadharisa zvigadzirwa zvako chero nguva chero kupi.
Nehunyanzvi hune chitarisiko, zvinowoneka maficha, uye zvekudzivirira, hombe hombe TIGERNU bhegi inoenderana nenzira yaunoshanda nayo.
TIGERNU nyowani dhizaini yemurume varume bhegi
Simba rakakura uye rakarongedzwa mushe bhegi: saizi yayo iri 30 * 15 * 43cm (L * W * H) .Imwe gobvu rakapetwa rakaparadzaniswa remakamuri epombi inokwana laptop kusvika pa15,6 inch. Yakakura imba huru ine gumi muhomwe yemukati inokodzera piritsi, zvinyoreso, nhare, mabhuku, mbatya; yakakosha homwe yemagetsi bhengi. Pamusoro kumberi zipi mupanda wemagirazi ako. 2 eparutivi homwe uye 1 yekumberi zipi mupanda webhodhoro rako remvura, amburera, notibhuku uye zvimwe zvidiki zvidimbu. Kugadzira bhegi rako rakarongeka.
Yakakwira mhando yezvinhu: TIGERNU bhizinesi rekufamba bhegi rakagadzirwa nekupwanya uye kukwenya kusagadzikana 900D polyester, iyo inorwisa-kubvarura uye eco-inoshamwaridzika.Mucheka usina mvura unochengeta zvinhu zvako zvakachengeteka kubva pakuputika uye kudonha. Iyo nyowani patent ina-zino mbiri-dura zipi yakasimba zvakanyanya uye inogara kwenguva refu kupfuura chiratidzo cheyadhi zipi, hazvisi nyore kuti zviparadzane kana iwe ukaisa zvinhu zvakawanda muhomwe.
Kunze USB Yekuchaja Port: TIGERNU USB yekuchaja bhegi ine inowoneka USB tambo inokupa iwe iri nyore nzira yekuchaja foni, piritsi, nezvimwe.
Inonyaradza & Inononoka: Kuyerera kwemhepo & gobvu rakapetwa kumashure uye tambo zvinoita kuti unzwe kugadzikana kunyange kutakura nguva yakareba. Ergonomics dhizaini uye inogadziriswa S-chimiro mafudzi mabhande anoenderana ergonomic mutoro kudzora system, anoparadzira mapendekete, musana, lumbar kumanikidza. Bhandi rakarukwa zvakanaka remidziyo rakanakira iwe kugadzirisa bhegi repapuroni patrolley yemukwende wako, uchiita rwendo rwako uye kufamba zviri nyore kwese kwaunoenda. Mahomwe maviri pamafudzi emabhanhire ezuva rako regirazi uye kadhi
Chengetedzo: Laptop bhegi rine rakavanzika anti kuba muhomwe kumashure chengetedza zvinhu zvako zvakakosha kubva kune mbavha. Zipper mbiri dzinogona kuvharwa nekiyi, saka haufanire kunetseka nezvemumwe munhu anoba zvinhu zvako. Kuchengeta zvinhu zvako zvakachengeteka!
Gamuchirai kujoina TIGERNU yemubatanidzwa wekukunda-kuhwina
TIGERNU fashoni dhizaini yakakura inokwana chikoro bhegi risina mvura
Chinyorwa: Iyi bhegi bhegi yakashandiswa is splashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, yakasimba, inogara kwenguva refu uye eco-inoshamwaridzika.Iyo splashproof ficha inoita kuti zvive nyore kwazvo kupukuta yakaoma uye yakachena.Zippers ndeemhando yepamusoro yakagadziriswa neTIGERNU logo, kuputika-chiratidzo uye kumeso Iyo zipi huru ine patent isinga pinde mvura isina kuvharika zipper, inochengetedzeka uye yakasimba.
Unyanzvi: Saizi yechikoro chebhegi saizi ndeye 31 * 16 * 48cm (L * W * H), iine imwe nzvimbo yakavanda & inokiyiwa yemakamuri epasi pebhandi repafudzi, ichipa chengetedzo yezvako zvakakosha. headphone, simba kubhengi, chikwama nezvimwewo Imwe kumberi muhomwe kuti nyore kuwana.Paviri divi muhomwe zvinhu diki uye mabhodhoro emvura. Iyo yekumashure anti kuba muhomwe yakakwana kune yako foni uye zvimwe zvakakosha zvakakosha.
Zvimiro: Chikwama chine mubato wakasimbiswa uye tambo imwe yepafudzi.Nekunze USB yekuchaja chiteshi & yakavakirwa-mune inogona kutsemurwa yekuchaja tambo, TIGERNU bhegi rinopa iri nyore nzira yekuti iwe ubhadhare yako yemagetsi kifaa pane iyo kuenda. Tambo dzebendekete dzinoderedza kunetsekana pamapendekete.Zasi yekudzivirira-kusvibisa dhizaini kunobatsira iwe kuti bhegi rako rive rakachena kana iwe uchida kuisa pasi.Tambo yemikwende inogona kusunungura maoko ako nekuisa bhegi musutukesi trolley.
Icho chakasanogadzirwa chikoro bhegi, fashoni uye chinoshanda. Izvo zvakare zvakakodzera kune bhizinesi, basa, kunotenga, musasa, pikiniki.
TIGERNU anti kubira laptop bhegi
Anti-kuba Backpack: Hapana zipi / homwe dzaigona kuwanikwa kumberi kwebhegi. Iyo zipi yakavanzwa zvizere iyo inochengetedza chikwama chako / laptop / smart phone / vamwe mukati mehombodo kure nembavha.
Unyanzvi: Iyo nhandare ine hushamwari bhegi: Flat yakavhurika bhegi rehunyanzvi rine makamuri akawanda anogona kuchengeta mbatya, laptop, piritsi, bhengi remagetsi. Pfuura Scan nzvimbo yakananga. Shock proof yemukati mudziyo inopa chengetedzo kubva netsaona kukanganisa kukuvara
Isina mvura & ABS Base: Yakagadzirwa nemvura isinganetsi / inopesana nekukasira jira rakasimba. Iyo yakavharirwa-in mvura inovhara yakachengetwa pazasi slot inochengetedza zvinhu zvako kuoma kubva kunaya. Anti-slip ABS base inoita kuti bhegi rako rigare rakachena kana waisa pasi yako laptop bhegi kana iwe wakaneta
Zvimiro: Yakavakirwa muUSP Port, yekunze USB Port ine tambo yekuchaja zviri nyore kubhadharisa smart foni / piritsi isina kuvhura bhegi; Reflective Stripe, bhegi rekufamba rine maviri Reflective Stripe kumberi iyo inoita kuti iwe uoneke paunenge uchichovha bhasikoro usiku. Mikwende Bhandi kuti ikwane nesokisi rinotenderera. Sunglass tambo kusunga fashoni gadget. Kadhi slots papfudzi tambo yekuwana nyore.
TIGERNU fashoni dhizaini yakawanda-inoshanda bhizinesi bhegi
Iyo TIGERNU bhegi bhegi inounza inoshanda dziviriro yechigadzirwa uye muti-unoshanda bhegi
• Yakakwira density polyester zvinhu, mhando yakanaka, inopenya, inorwisa-kubvarura uye eco-inoshamwaridzika.
• Ine furemu-yakachena-yakamisikidzwa furemu, irori rinoratidzira rakapetwa ruoko ruoko uye piritsi ruoko ine yakachengeteka pamupendero uye inovhunduka sero kudzivirira laptop yako uye nezvimwe zvishandiso kubva kumazuva ese mapundu.
Kukura kwayo kuri 30 * 15 * 47cm (L * W * H) Iine kamuri hombe hombe ine homwe dzakawanda dzekuchengetera mabhuku emabhuku, mabhuku kana maforodha mune ino huru imba ine zipu yakavanzika yehomwe yakakosha. kumberi uye imwe yepamusoro zipi homwe, uye maviri epazasi zipi homwe, iri rakakwana rongedza rako rezuva nezuva giya uye chengeta bhegi rako rakarongedzwa uye rakarongedzwa.
• Takura wakasununguka neakafa-akacheka EVA mapepa emabendekete emhepo inofefetedza, rakapetwa kumashure pani ine mweya wekuyerera chiteshi uye isina kuenzana dhonza mubato. Iwo akasungirirwa mabhande epafudzi anopa kutakura kwakasununguka pamusoro pemapfudzi.
TIGERNU classic dhizaini chikoro bhegi
Unyanzvi: Iyo bhegi iri anti kuba dhizaini ine saizi ye 29 * 14 * 45cm (L * W * H) .Iyo huru imba ine akawanda homwe uye yekuvaka-mune yakapetwa laptop slot inokwana kusvika 15.6 ″ Laptop. kune zvako zvezuva nezuva zvaunoda, mabhuku, mbatya, simba bank, headphone uye zvichingodaro. Imba yepamberi ine akawanda akapatsanura homwe inobatsira kuronga ako madiki stuffs, zvinyoreso, chikwama, foni, tambo nezvimwewo Rimwe divi zipi homwe uye rimwe divi pajira riya muhomwe; back anti kuba muhomwe yezvinhu zvakakosha
Kuchengetedzwa maficha: Iyo fashoni bhegi rakagadzirwa neyakajeka splashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, yakasimba uye inogara kwenguva refu. Iyo mbiri yakapetwa mana mazino patent zipi pamwe chete neyakavakirwa-muTSA kukiya inopa kumwe kuchengetedzeka kwekufamba kwako uye hupenyu hwezuva nezuva. Mberi yepakati yebhuruu neyeorenji jira sekushongedza, zvichiita kuti chikoro bhegi riwedzere fashoni uye inotonhorera.
Maitiro: Bhizinesi bhegi rine maviri akasungirirwa akagadziriswa mabhande epafudzi uye rakapetwa kumashure mapaneru ayo anokurudzira kufefetera kwekunyaradzwa paunenge uchienda Uye izvo zvinogadziriswa uye zvakanyanya zvakapfekedzwa tambo dzefudzi dzakakwenenzverwa kuita kuti bhegi rive rakasununguka kupfeka kunyangwe rakatakurwa neyako giya. Iyo yekuvakira-mu USB chiteshi inoita kuti iwe ugone kubhadharisa foni yako chero nguva chero kupi zvako pasina kutora yako simba bhengi.
Iyi bhegi ndeye yakasarudzika dhizaini anti kubira bhegi, inokodzera varume, vakadzi, vadzidzi chero chinangwa. TIGERNU bhegi rakanakira chikoro, yunivhesiti, kupera kwevhiki, kufamba pano neapo, majimu, basa rezuva nezuva, bhizinesi, rwendo, musasa uye kukwira.